KU SAMEE BOOT NADIIF AH GUDAHA WINDOWS 10 / 8.1 / 7 SI LOO OGAADO ARRIMAHA - JILICSAN
Ku samee Boot nadiif ah gudaha Windows 10 / 8.1 / 7 si loo ogaado arrimaha
Mararka qaarkood, waxaad u baahan doontaa samee kabo nadiif ah si loo xalliyo dhibaatooyinka caadiga ah ee gudaha Windows 10, 8.1, 8, ama 7. Boot nadiif ah ayaa kuu ogolaanaysa inaad bilowdo Windows adigoon socodsiin adeegyada aan Microsoft ahayn. Waxay kaa caawin doontaa inaad xalliso oo aad go'aansato codsiga ama barnaamijka keenaya dhibaatada aad haysato. Isticmaalka boot nadiif ah, waxaad ogaan kartaa haddii OS-gu uu waxyeelo u geysto qaar ka mid ah app-ka dhinac saddexaad ama darawal xun. Adigoo ka hortagaya inay rartaan, waxaad ka saari kartaa saameynta labadan arrimood.
Marka aad u baahan tahay Boot Nadiif ah
Haddii aad si isdaba joog ah ula kulanto dhibaato daaqadaha muhiimka ah, waxaa laga yaabaa inaad u baahato samee kabo nadiif ah . Sidoo kale Qaar ka mid ah waqtiyada ka dib markii loo cusboonaysiiyay Windows 10 ama Ku rakib dhawaan Windows 10 cusbooneysiinta, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto khilaafyo software. Si loo xaliyo dhibaatada, waxaa lagama maarmaan ah samee kabo nadiif ah . Caadi ahaan, Waxaan sameynaa marka aan la kulanno dhibaatooyinka muhiimka ah ee daaqadaha sida shaashadda buluuga ah ee khaladaadka dhimashada.
Sida loo sameeyo Boot nadiif ah Windows 10
Xaaladda kabaha nadiifka ah ee Single Word, Windows ma shubto wax barnaamijyo iyo adeegyo dhinac saddexaad ah inta lagu jiro bilowga. Marka, dadku waxay door bidaan inay ciladeeyaan mashaakil badan oo daaqadaha ah gaar ahaan Khaladaadka BSOD.
Haddii kombuyuutarku aanu si caadi ah u bilaaban ama uu helo khaladaad kala duwan marka aad bilowdo kombayutarka oo aanad garan karin, waxa aad ka fikiri kartaa in aad samayso boot nadiif ah.
Fiiro gaar ah: Tallaabooyinka Bellow waa kuwo lagu dabaqi karo si loogu sameeyo boot nadiif ah Windows 10, 8.1, iyo 7 .
Samee Boot Nadiif ah
Isticmaal kiiboodhka gaaban ee Windows + R si aad u furto Run,'
Ku qor msconfig oo guji ok si aad u furto daaqada habaynta nidaamka
Hadda hoosta 'General' tab, guji si aad u doorato ikhtiyaarka Bilawga xulashada ,
Ka dibna calaamad ka saar Soo rar walxaha bilowga sanduuqa calaamadee.
Sidoo kale, Hubi in nidaamka Load adeegyada iyo Isticmaal qaabeynta boot asalka ah waa la hubiyaa.
Curyaaminta Adeegyada Qaybta Saddexaad
Hadda u tag Adeegyada tab,
Halkaa, Mark Qari dhammaan adeegyada Microsoft .
Waxaad ka heli doontaa xagga hoose ee daaqadda. Hadda, dhagsii Dami dhammaan
Talaabada xigta u dhaqaaq,
Waxaad ka heli Option furan Task Manager guji.
Hadda oo ku yaal Taskmanager hoosta Startup Tab Disable All Startup Applications. Kadib xidh Taskmanager.
Haddii aad tahay isticmaaleyaasha Windows 7 Markaad u guurto Tababbarka Bilawga, waxaad heli doontaa Dhammaan Liiska Shayga bilowga ah. Ka saar dhammaan barnaamijyada bilowga oo guji Codso Oo ok.
Waa intaas oo dhan Hadda dib u bilow kombayutarkaga. Waxay ku ilaalin doontaa kombuyutarkaga xaalad boot nadiif ah si loo arko haddii dhibaatadu meesha ka baxday. Waxaad u shidi kartaa abka kasta mid mid iyo adeegyada si gaar ah ka dib si aad u ogaato sida saxda ah ee app-ka ah sababta arrintaada.
Si aad ugu soo laabato bootinta caadiga ah, Kaliya ka noqo isbeddelada aad samaysay oo dib u bilaw kombayutarkaga.
Sidoo kale Haddii kabaha nadiifka ah aysan caawinin Si loo Hagaajiyo Arrinta Bilowga waxaan kugula talineynaa Kabi Carmallada Qaab Badbaado leh (Taas oo ka bilowda daaqadaha u geli shuruudaha ugu yar ee nidaamka oo Oggolow in la sameeyo tillaabooyinka cilad-raadinta si loo hagaajiyo mashaakilaadka Bilowga kala duwan).
Tilmaanta A ilaa Z ee Darawalada Aaladaha ee Windows 10, 8.1 iyo 7
Sida loo xaliyo dhibaatooyinka codka ama maqalka gudaha Windows 10
Windows 10 Sawirrada App-ka Aan Furayn/Shaqeynaynin Cusbooneysii ka dib? Aan hagaajino
Sida loo hagaajiyo Google chrome waxa uu joojiyay shaqada windows 10, 8.1 iyo 7
Miyuu Windows 10 Kombuyuutarku si lama filaan ah u bilaabay? Dalbo xalalkan